ग्याजेटहरू हाम्रो जीवनको अभिन्न भाग बन्न पुगेका छन्, त्यसैले हरेक फैलावटले उनको पर्समा मात्र मनपर्ने इत्रको सानो बोतल मात्र होइन, तर आधुनिक मोबाइल फोन, स्मार्टफोन वा ट्याब्लेट पनि। अधिकांश ग्याजेट मोडेलहरू टच स्क्रिनमा लैजान सकिन्छ, जसले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने प्रक्रियालाई धेरै सुविधा दिन्छ। औंलाको एक हल्का स्पर्श - र यो तयार छ! सरल र सुविधाजनक! तर जाडोहरूमा होइन, जब तपाइँ फ्रिनिहरू अन्तर्गत औंलाहरू लुकाईदिनुहुन्छ। दुर्भाग्यवश, टच स्क्रीनले यस्ता छुटहरूको प्रतिक्रिया गर्दैन। यो आवश्यक छ कि तपाईलाई न्यानो ठाउँमा पुग्न नसक्ने कुरा नगर्नुस्, वा आफ्नो दस्तुरहरू छोड्नुहोस् र फ्रिज गर्नुहोस्। तर त्यहाँ एक अधिक तर्कसंगत समाधान छ, र यी महिलाहरु को छल्ले दस्ताने छन्, जो केवल आईफोन र अन्य टच फोनका प्रयोगकर्ताहरु को लागि अपरिवर्तनीय छन्!
अभिनव प्रविधि + व्यावहारिक सहायक
यदि तपाईं चरणमा बस्नुहुन्छ भने र एक आईफोन, आईप्याड, ट्याब्लेटको साथ ट्याब्लेट, टचस्क्रिन स्मार्टफोन, इ-बुक वा अन्य समान यन्त्रको साथमा तपाईले कुनै पनि अवस्थामा दस्ताने पाउनुपर्दछ। उनीहरूको मद्दतको साथ, तपाईं वर्षको कुनै पनि समयमा ग्याजेटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो सामानको सञ्चालनको सिद्धान्त यो हो कि प्रवाहकीय सामाग्री को विशेष आवेषण दस्ताने को औंलाहरु मा बनाइन्छ। यो ध्यान दिईएको छ कि निर्माताहरुले यो सामाग्री सम्पूर्ण ग्लोव सतहमा र बिन्दु जस्तै प्रयोग गर्न सक्दछन्। यदि तपाइँ केवल तीन औंलाहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, ग्याजेटसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईं टच स्क्रिनहरूको लागि महिला महिला दस्ताहरू खरीद गर्न सक्नुहुन्छ, इग्लोवद्वारा निर्मित, वा अन्य कम्पनीहरूको समान उत्पादनहरू। यस्तो मोडेलमा, सिग्नल-लेगमेन्ट सामग्री केवल दहिनीहरूको तीन औँलाका पङ्क्तिहरूमा सिंध हुन्छ, जसले सहायक सट्टाको अन्तिम लागत दिन्छ। यस अवस्थामा, सेन्सर औंलाहरु संग दस्ताने पारंपरिक सामाग्री देखि बनेको जस्तै गर्म हो। यो यस कारण हो कि खरिद वैध छ, किनकी तपाईंले रोजगारीको जीवनमा तिनीहरूलाई लुगा लगाउन सक्नुहुन्छ।
यदि सहायकलाई सफाई चाहिन्छ, यो पनि एक समस्या छैन। टच स्क्रिनको लागि ऊन कपालहरू धोईन सकिन्छ। अर्डर खराब गर्न आदेश, लेबल वा प्याकेजमा जानकारी पढ्न निश्चित हुनुहोस्। धेरै मोडेलहरू मात्र चिसो पानीमा धोइनुपर्छ।
यो कुनै लुगा छैन कि धेरै केटीहरूले वास्तविक छाला बनाइएका सामानहरू मन पराउँछन्। निस्सन्देह, यो सामग्री ऊ ऊ भन्दा भन्दा धेरै महान् देखिन्छ। निर्माताहरू पनि यो ख्याल राख्छन्, छाला सेन्सर दस्ताने जारी गर्छन्। व्यावहारिक सहायक चयन गर्दा, Heattech प्रविधिको उत्पादनमा प्रयोग गरिएका मोडेलहरूमा ध्यान दिनुहोस्। यसको प्रयोगको लागि धन्यवाद, ऊनी र चमडा दस्ताने टच स्क्रिनको लागि न केवल आफ्नो मुख्य कार्यको सामना गर्न को लागी, तर तापनि तापक्रम पनि राख्नुहोस्। यस्तो मोडेल जापानी कम्पनी Uniqlo को संग्रह मा देख्न सकिन्छ।
त्यहाँ धेरै सस्ती दस्तानेहरू छन्, जसमा एक्रिलिक, पोलीयुरेन र नायलॉन समावेश गर्दछ। सिंथेटिक फाइबरले सान्त्वना, सूखा र गर्मी प्रदान गर्छ। प्रसन्नता र तथ्य हो कि सेन्सर दस्ताने रंगहरु को एक विस्तृत श्रृंखला मा उपलब्ध छ, न केवल पकाया रंग को रंगहरुमा , जुन केटीहरुको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
दस्ताने को छनौट को विशेषताहरु
यो व्यावहारिक र कार्यात्मक सहायक खरीद गर्दा, निश्चित गर्नुहोस् कि दस्ताहरू तपाईंको ग्याजेट नियन्त्रण गर्न उपयुक्त छ। अधिक महंगा मोडेल, सेन्सर यन्त्रहरूसँग अनुकूलताको सन्दर्भमा यसको बहुमुखी क्षमताको सम्भावना अधिक छ।
साइजको लागि, त्यहाँ कुनै स्पेशिक्सहरू छैनन्। साधारण दस्ताहरू किन्ने बेलामा समान नियमहरूद्वारा निर्देशित एउटा सहायक छान्नुहोस्।
एक ठूलो पिसाब टोपी
स्कार्फ - XXI सदीको सहायक
इत्र अणु 02
इनाम संग चांदी बालियां
ल्यापटपका लागि ब्याकप्याक - हरेक दिनको लागि उत्तम र स्टाइलिश थलो
महिला ह्यान्डब्याग ट्याब्लेट
महिलाको बेसबल क्यापहरू
क्षैतिज पट्टीमा कडाईको लागि दस्ताहरू
विवाहमा अतिथिहरूको लागि उपहार
ग्लुटेन - यो के हो र बच्चाहरुको लागि किन हानिकारक छ?
बहुमुखी मा कद्दू पुष्प
छोराछोरीमा हातले बाबा
स्ट्राबेरी कफीको फल
क्यालेन्डुला तेल - अनुप्रयोग
सामाजिक सिजनको विशेषताहरू
राम्रो आर्द्रता पाउनको लागि आलु कसरी सही तरिकाले रोप्नु हुन्छ?
माछाको लागि एक्वैरियममा तापमान
भाइरस रेजहरूको लागि लोक उपचार
Ilyin Day मा साईनका लागि साइन्स
पुरानो मनोविज्ञान - लक्षणहरू
13 जना महिलाहरूको सबैभन्दा प्रेमी प्रेमीहरूको: हाम्रो अतीत र पुरुषका उदाहरणहरू
उज्ज्वल नीलो जीन्स
पामेला एन्डरसनका छोराहरू एक मोडेललिंग क्यारियर बनाउन चाहँदैनन्!
आंत बाधा - लक्षणहरू
प्रिंस जर्जमा पजमासले उपहारको लागि बराक ओबामालाई धन्यवाद दिए
कुन उत्पादनमा धेरै पोटेशियम छ?
बीउ बेकनको लागि नुस्खा